चिकित्सक भन्छन् : आँखा अगाडि बिरामीको छटपटाहट देख्दा भोक, प्यास र परिवारनै विर्सन्छौँ – Dainik Samchar
May 21, 2021 373
कोरोना महामारीको दोस्रो भेरियन्ट देखापरेसँगै सङक्रमितको चाप बढेको छ । लक्षण सहित कोरोना पोजेटिभ देखिएकाहरूलाई फोक्सोमा असर गर्ने तथा निमोनिया हुनेजस्ता जटिलताले अघिल्लोभन्दा यस पटक अस्पतालमा भर्ना हुने बढ्दो छन् । अहिलेको जोखिममा ज्यानको पर्वाह नगरी अस्पतालमा दिनरात चिकित्सक, नर्ससहितका स्वास्थ्यकर्मी अहोरात्र खटिरहेका छन् । निरन्तर सेवामा खटिरहँदा कतिपय चिकित्सक, नर्स एवम् अन्यस्वास्थ्यकर्मी आफै पनि सङ्क्रमित हुन पुगेका छन् । नेगेटिभ रिर्पोट आएको भोलिपल्टै सेवामा खटिनुपर्दा पर्याप्त आराम गर्ने समय पनि यतिबेला चिकित्सक, नर्ससहितका स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाइ नभएको उनीहरू बताउँछन् ।
Prevयी श्रीमान् जसले ८ घण्टा पिठ्यूँमा बोकेर को’रोना संक्रमित श्रीमतीलाई अस्पताल पुर्‍याए facebook sharing buttontwitter sharing buttonpinterest sharing buttonemail sharing button
Nextनेपालमा आज पनि कोरोनाको बन्यो यस्तो रेकर्ड, यो संगै सरकारले पनि जारि गर्यो सर्वसाधारणका लागि यस्तो सूचना
बुवाआमाले जग्गा बे’चेर बिहे गरिदिए, ८ महिनाकी गर्भवती लाई दाइजाेकाे नाउँमा ह’ त्या !
ग्याष्ट्रिकले सतायो ? नआतिनुहोस्, यी घरेलु उपचारबाट पाउनुहोस् छुटकारा
काठमाडौं कोटेश्वरबाट अचम्मका ब्यक्ती पक्राउ ! स्वयम्भु, सीतापाइला, तीनकुने, कागेश्वरी, मूलपानी सबै ठाउँमा भ्याएछन (2154)